Radio Ergo 04 September, 2017 MUDUG
Deegaanka Camaara oo Gaalkacayo u jirta 220km, kagana beegan dhinaca Koonfureed, waxaa afartii todobaad ee lasoo dhaafay gaaray 670 qoys oo ka tegay tuulooyin ku teedsan deegaankaas oo sanadkii saddexaad ay abaaro ka jireen.
Meelaha dadkaani ka soo barakacayaan waxaa ka mid ah Caad, Qorilay, Korodhi, Gumar, Ceel-cabdi iyo Miliqo oo kawada tirsan gobolka Mudug. Dadkan markii xoolihii ay ka dhammaadaan waxay dantu ku khasabtay in ay u guuraan magaalooyinka si ay nolol uga helaan.
Maxamed Cali Faarax waa aabe qoys ka kooban 8 qof, mudo laga joogo laba todobaad ayuu u barakacay camaara ee gobolka, waxay qoyskiisa dul saarku yihiin qoys kale oo ehel ah oo degan tuulada, isagoo soo galay 10 maalmood ka hor.
“250 neef oo adhiya ayaan lahaa, hal neefna kama harin, hadda qoyska aan dulsaarka ku ahay iyaba wax ima dhamaan, hal mar ayey dab shitaan, markaas ayaan la cunaa wixii ay helaan,” ayuu yiri Maxamed.
Wuxuu sheegay in deegaanka Caad oo uu ka yimid, 28km Koonfur ka xigta Camaara ay markii ceelashii gureen.
Maxamed ayaa qoyskiisa kasoo rararay meel 28km kaga beegan Koonfurta Camaara, kadib markii ceelal halkaas ku yaallay ay gureen.
“Qoyska waxaan kusoo qaaday baabuur, waxaana iga caawiyey nin aan qaraabo nahay, ma ay socon karin, sida ay u waydoobeen carruurtu, qoyska aan soo kor dagnay mudo badan makor deganaan karno, waayo qoys kakooban 8 qof mayara culayska aan kuhayno waa dareemikartaa.”
Qoysaskan ayaan gar-gaar helin tan bishii shanaad ee sanadkan, xilligaas oo ay hay’adda WFP ay 200 qoys oo ku nool Camaara u qaybisay raashin isugu jira Gallay, Boorash iyo Saliid. Wixii wakhtigaas ka danbeeyey dadka degan Camaara iyo kuwii dhowaan usoo bakaracay ma helin wax gar-gaar ah.
Dadka dhowaan barakacay ayaa ku raja waynaa in ay Camaara ka heli doonaan, gar-gaarka ay u baahanyihiin. Sida uu Radio Ergo u sheegay Maxamed Cali. Abaarta kahor ayuu sidoo kale tilmaamay in uu dhaqanayay 250 neef oo ari ah iyo laba awr oo uu reerka ugu dhaamin jiray, xilligana aan mid ka hayn.
Maadaama xoolihii uu ku tiirsanaa ay abaartu ka dhammaysay, isla markaana aanu lahayn xirfad kale oo uu ku shaqaysto, ayuu wakhtigan camal la’aan ku yahay deegaanka Camaara ee gobolka Mudug.
Cibaado Cabdi Faarax oo haysata Lix caruur ah, waxay abaartu kala kaxaysay iyada iyo saygeeda, muddo saddex todobaad laga joogo ayay u barakacday Camaara. Waxay ka timi baadiyaha deegaanka Miliqo ee gobolka Mudugu, halkaas oo Camaara u jirta 27km. Cibaado waxaa ay sheegtay in 200 oo neef oo ari ah oo ay lahayd hadda ay ka haysato 20 neef.
Baad iyo biyo la’aan ay kala kulantay halkii ay markii hore ku noolayd ayaa iyada iyo qoyskeeda ku khasbay in ay Camaara u barakacaan.
“Saygaygu waxa uu cararay Xamar markii abaartu adkaatay xoolihiina dhammaadeen, aniga iyo carruurtayduna waxaan u barakacnay Camaara oo hooyaday ay degantahay, xaaladdu waa mid alle, markii hore waan soo lugeeyey, markii aan saacado lugaynayay aniga iyo caruurtayda oo kan ugu yar uu jiro 3 sano, waxaa dhex iga soo qaaday gaari oo Camaara ikeenay. Intaan Camaara nimid sidii hore waan dhaana oo baahidii badnayd way naga ba'day laakiin dulsaar uun baan nahay,” ayey tiri Cibaado.
Yuusuf Salaad Maxamed guddoomiyaha Camaara, ayaa Radio Ergo u sheegay in 670 qoys ay todobaadyadii lasoo dhaafay gaareen Camaara, kuwaas oo baad iyo biyo doon ah, kadib markii ay kasoo barakeceen deegaanadoodii oo abaaro tabaaleeyeen.
Deegaanka Camaara ayaa ku tiirsan xoola dhaqatada miyiga, waxaase markii danbe dadku ay ku cayroobeen abaarta. Dadkii dhowaan tegayna waxay culayska kusii kordhiyay dad meelo kala duwan ka yimi oo laftooda kasoo xoolo beelay abaarta.
Guddoomiyaha Camaara Tuusuf Salaad Maxamed ayaa sidoo kale sheegay in wakhtigaan 1200 oo qoys oo abaaraha ku soo cayrtoobay degaanka ku sugan yihiin, aysan jirin dowlad iyo hay'ad gacan ka gaysatay u gar-gaarida dadka kudhibataysan Camaara iyo deegaanada kudhow. Maamulkiisa oo kaashanaya culimada iyo qaybaha bulshada deegaanka ayuu sheegay in ay isu istaageen sidii dadkan wax loogu qaban lahaa.